Natraygroup | ACTIVITYEVENT
E’KO PUBLIC CHAIR
e’Ko – Contract Furniture
E’KO-SCHOOL & LIBRARY
Casabella 26th Anniversary’ Hi-Tea party
Posted by natray natray | ACTIVITYEVENT | One Comment
June 22 ရက်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Casabella 26th Anniversary’ Hi-Tea party ပွဲလေးကို ကြွရောက်ပေးကြတဲ့ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီး Read More
Casabella’ 25th Silver Anniversary Celebration
Posted by natray natray | ACTIVITYEVENT | No Comments
🎊Casabella ရဲ့ 25th Silver Anniversary Celebration🎊 မှ Read More
SIMMONS Mister & Miss ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား
SIMMONS Mister & Miss ဆုပေးပွဲကြီးကို ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့က အထူးဧည့်သည်တော်များ၊ Read More
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ က မင်းဓမ္မလမ်းပေါ်ရှိ MEP မှာ ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ Myan Hotel ပွဲတွင် တတိယအကြိမ်မြောက် Bed Making Competition ကို NatRay Co., Ltd မှ ကြီးမှူးကျင်းပခဲ့ပါတယ်.. Read More
Casabella’s Mid Year Sale 2017 ရဲ့ Lucky Draw winner များ
ပြီးခဲ့တဲ့ July နဲ့ August လအတွင်း ရန်ကုန် မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာ အသီးသီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Casabella ရဲ့ Mid Year Sale(2017) အရောင်းပွဲတော် မှာ သိန်းနှစ်ဆယ်ဖိုးနဲ့ အထက် လာရောက် ဝယ်ယူ အားပေးကြတဲ့ Customer များကို Read More
”Valentine’s Charity Gala Ball”
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့ က Sule Shangri-La Hotel မှာ Read More
”Myan Food & Mayn Hotel 2016″
ရန်ကုန်မြို့ ဦးဝိစာရလမ်း ရှိ မိုင်ဒါ ကွင်းတွင် November လ ၂၄ ရက်မှ Read More
Mr.Dunlopillo & Ms.Dunlpillo
နိုဝင်ဘာ (၅) ရက်နေ့ မန္တလေး အမျိုးသား ကဇာတ်ရုံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Crown Couple Award 2016 ပွဲကြီးကို Read More
အိုလံပစ် နေ့ အထိမ်းအမှတ် “Mr.NarRay” နှင့် “Ms.Real” ရွေးချယ်ပွဲ ကျင်းပ
၂၀၁၆ ခုနှစ် အိုလံပစ်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ ကာယဗလ နှင့် ကာယ ကြံ့ခိုင်မှု အဖွဲ့ချုပ်နှင့် NatRay Co.,Ltd. တို့ ပူးပေါင်း ကျင်းပသည့် ကာယဗလမောင် Mr.NatRay နှင့် ကိုယ်ကာယ ကြံ့ခိုင်မှုမယ် Ms.Real ရွေးချယ်ပွဲကို Read More
Silver Sponsor by Casabella to wedding fair, ” The Journey Of Love “
Posted by natray | ACTIVITYEVENT | No Comments
Casabella will proudly participate as silver sponsor at wedding fair, namely ” The Journey Of Love “ that will be held at Myanmar Ballroom, Sule Shangri-La Yangon on June 5, 2016. Read More
OSIM uLove2(Massage Chair)
“Casabella NayPyiTaw Mid-Year Sale”
BED COFFEE TABLE Desk & Chair Dining Cabinet DINNING SET e'ko work station Furniture RECLINER Side Board SOFA
Casabella is the one stop home furnishing center that offers wide variety of merchandise: Mattress and Bedding, Furniture (banquet), Customize Furniture (fabric/leather), Office Furniture, Fitness Equipment, Carpet, Curtain, Wallpaper, Kitchen Ware and Table Ware.
No.22, Pyay Road, 9Mile, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.
Tel: 01-664363, 660769
© 2020 Natraygroup. Powered By Ideal Technology.